Xukuumadda oo beenisey in madaxweynaha Soomaaliya uu lakulamy ra’iisul wasaaraha Israa’iil. – Radio Daljir
Xukuumadda oo beenisey in madaxweynaha Soomaaliya uu lakulamy ra’iisul wasaaraha Israa’iil.
Luulyo 7, 2016 12:09 b 0
(July 07 2016)-Wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa beenisey warar sheegayey in madaxweynaha Soomaaliya uu kulan laqaatay ra’iisul wasaaraha dowladda Yuhuuda Natanyahu.
Warka Wasaaradda waakan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay ka shaqeyneysaa si aan habacsanaan ku jirin abuuridda, cusbooneysiinta iyo xoojinta xiriirka iyo dan wadaaga, taasi oo u adeegeysa danaha qarankeena ee ka qeyb ah wadamada deriska iyo kuwa isbaheysiga nala ah ee dunida daafaheeda .
Soomaaliya waxa ay si guul leh uga soo banbaxday waqti tegay oo adag, ayna u gudubtay xilli cusub oo deganaansho iyo horumar ah. xagashu waxa isku badashay oo ay u jiheysatay dhanka mustaqbal horumarineed oo aad u wacan. Sidaa darteed, waxaa muhiimad u leh Soomaaliya inay la ambaqaado howsha si wax ku ool leh dhammaan bahwadaagta si ay ku jirto awoodaha oo dhan ee la xiriira dhammaan arrimaha xiisa wadaagga leh oo ay ka mid tahay ka hortagidda argagaxisada caalamiga, dhiirigelinta horumarka dhaqaalle iyo fududeynta ganacsiga.
Xilli Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay qiimeyneyso dhammaan bahda ay dan wadaagta yihiin, ayna ku dadaaleyso u saldhigidda xiriiro macna leh wadamada isbaheysiga ah iyo kuwa cusub, iyadoo u jeedka yahay hubinta horumarka iyo barwaaqada mustaqbalka Soomaaliya , Wasaaraddu waxa ay xaqiijineysaa in kulanka la sheegay ee dhexmaray Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha Israel aanu qabsoomin.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Saaka iyo Dunida Xarunta Garoowe 07 07 2016.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Caawa iyo Daljir Xarunta Garoowe 06 07 2016.